စိတ်ကူးပုံရိပ်: August 2007
အိပ်ရာပေါ်မှ အလူးအလဲ ထလိုက်သည်။ ပုံရိပ်အိပ်ခန်းနှင့် မတူသော အိပ်ခန်းတစ်ခု။ အိပ်ချင်မူးတူး နှင့်လိုက်ကြည့်သည်။ အင်…ဘယ်ရောက်နေပါလိမ့်။ computer စသလို အသံလေး သဲ့သဲ့ကြားရသည်။
“သမီးရေ… ထတော့။ ဒီနေ့ ဘာလုပ်စရာ၊ ဘယ်သွားစရာ ရှိသေးလဲ။”
အမျိုးသမီးကြီးတစ်ဦး အခန်းထဲ ၀င်လာသည်။
“ဟိုမှာလေ… ညည်း computer။ ကျုပ်ဘာမှ မလုပ်ပါဘူး။ ကဲ အမေ ထမင်းကြော်ထားတယ်။”
ပြောပြောဆိုဆိုနှင့် အမျိုးသမီးကြီးက အခန်းထဲမှ ထွက်သွားသည်။ “your new life memory has started” ဟူသော အသံသေးသေးလေး နားထဲမှာ ကြားလိုက်ရသည်။ သြော်… ငါ့ရဲ့ ဘ၀သစ်ပဲဟု အဲဒီတော့မှ သဘောပေါက်သွားသည်။ မနေ့က ယမမင်းလူများ ဦးနှောက်၏ နောက်နားတွင် စက်အသေးစားလေး (minibrain) တစ်လုံးထည့်ပေးလိုက်တာ သတိရသည်။ ထိုစက်လေးထဲတွင် စာရေးဆရာမ၏ မှတ်ဥာဏ်အားလုံးကို ထည့်ပေးလိုက်သည်။ လိုအပ်သည့် အချိန်မှာ အကူအညီပေးနိုင်သည်။ ဘာလုပ်ရမှန်း မသိလျှင် ညွှန်ကြားချက်များ ပေးနိုင်သည်။ ပုံရိပ်က ထိုညွှန်ကြားချက်များကို ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက် ဖြင့် overwrite လုပ်နိုင်သည်။ ဘ၀အသစ်ကို စပေတော့မည်။
ထမင်းကြော်ကို စားပြီးအပြင်ထွက်ခဲ့သည်။ အမေဆိုသော အမျိုးသမီးကြီးနှင့် ဆက်ဆံပြောဆိုရာတွင် အမှားအယွင်းမရှိ။ မျက်နှာသစ် သွားတိုက်နေစဉ်တွင် စာရေးဆရာမ၏ ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကို အမြန်ဆုံး သင်ယူလိုက်သည်။ ပုံရိပ် ကံကောင်းသည်မှာ ထိုစာရေးဆရာမသည် အမေနှင့် နှစ်ဦးတည်း နေကြခြင်းပင်။ အရေးထဲ ပုံရိပ်က အပြင်ထွက်ကာနီး “အမေ…ကား…” ဆိုပြီး ကားသော့ တောင်းမည် လုပ်သေးသည်။ minibrain ကသတိ ပေးသည်။ “စာရေးဆရာမ တွင်ကားမရှိပါ” တဲ့။ ကားမရှိတော့ ကောင်းတာပေါ့။ ဆီဈေးတွေ ဒီလောက်တက်နေတာ။ ကိုယ့်ဟာကိုယ် တစ်ယောက်တည်း တွေး၍ လှေကားမှ ဆင်းလာခဲ့သည်။
တိုက်ခန်းခြောက်လွှာ မှဆင်းလာပြီး မြေညီထပ်ရောက်ခဲ့ပြီ။ ဘယ်ကားစီးပါ ဟုညွှန်ကြားချက် မရခင် ပုံရိပ်ဘတ်စ်ကား တစ်စီးပေါ်တက်ခဲ့သည်။ ပထမ ပန်းဆိုးတန်းမှာ စာအုပ်သွားဝယ်ရန်။ လိုအပ်သော စာအုပ်များ စာရင်းကို minibrain ကပြောပြပေးသည်။ ပန်းဆိုးတန်း မှတ်တိုင်မှာ ဆင်းသည်။ မဖတ်ရတာ ကြာသော စာအုပ်များ ၀ယ်သည်။
ပြီးနောက်… စာပေစီစစ်ရေးသို့ သုံးနာရီတွင် သွားပါတဲ့။ သုံးနာရီထိုးတော့ ရုံးခန်းတစ်ခု ရှေ့မှာထိုင်စောင့်သည်။ ပျင်းပျင်းရိရိ နေ့လည်ခင်းကို ထိုင်ကြည့်ရင်း minibrain က အကျဉ်းချုပ်ပြောပြသည် ကိုနားထောင်၏။ စာရေးဆရာမ၏ မကြာမီကမှ (သူ့ဘ၀ကို မရောင်းခင်) အပြီး ရေးထားသော လုံးချင်းဝတ္ထုကို စာပေစီစစ်ရေးသို့ တင်ထားသည်။ ခုကိစ္စက ထိုစာအုပ် အတွက်ပဲ ဖြစ်မည်။ ပုံရိပ်ကလည်း တခါမှ မကြုံဘူး၍ ဘာပြောရမည် ဘာလုပ်ရမည် မသိ။ စာအုပ်၏ အကျဉ်းချုပ်ကိုတော့ ကြိုတင်သိ ထားနှင့်နေသည်။ ဘာမှ ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးတော့ ဖြစ်မည်မထင်။ သုံးနာရီခွဲတော့ လူတစ်ယောက် ထွက်၍ လာခေါ်သည်။
“မXXXX ၀င်သွားနိုင် ပါပြီ”
အခန်းတစ်ခု၊ စားပွဲတစ်လုံး၏နောက် တွင်လူတစ်ဦးထိုင် နေသည်။
“ထိုင်ပါ ခင်ဗျ။ ဒါကတော့ ခင်ဗျားရဲ့ စာအုပ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးဖတ်ပြီးတဲ့ နောက်ထုတ်သင့် မထုတ်သင့် စဉ်းစားပြီးပါပြီ။”
“ဖြတ်ရမယ်လို့။ ရှည်နေတာတွေ ဖြတ်ရမယ်”
“ဟို…ကျွန်မ ရောက်နေတာ… အတိုချုပ်တဲ့ရုံး များလား”
“ခင်ဗျားရောက် နေတာ စာပေစီစစ်ရေးပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာ…ဒီကနေ ဒီအထိကို ဖြတ်ပေးပါ။ ဒါမှ ထုတ်လို့ ရမယ်။”
စာရွက်များကို တဖျတ်ဖျတ်လှန်လိုက်တော့ စာအုပ်၏ သုံးပုံတစ်ပုံမျှ ပါသွားသည်။ တစ်ခုခု ပြောမည်ပြင်တော့ minibrain ဆီမှ အသံထွက်လာသည်။ “ဟုတ်ကဲ့လို့ ပြောပါ။ ပြီးရင် သွားကြစို့”။
ရုံးထဲမှ ပြန်ထွက်လာတော့ နေကျဲကျဲပူနေသော ကောင်းကင်ကို မော့ကြည့်သည်။ ဒီဘ၀နဲ့ ရှေ့ဆက်လို့ ဖြစ်ပါဦးမည်လား။ မလွယ်ပါလားနော်။ ခါးကြားမှ “ဘ၀ကူးဖုန်း” (ဘ၀တစ်ခုမှ တစ်ခုခေါ်၍ ရသောဖုန်း) ကိုထုတ်လိုက်သည်။
“လူကြီးမင်း ခေါ်ဆိုသည့် ဘ၀ကူးဖုန်းဟာ……”
“ယမမင်းအင်န်ဆန်းစ်က ပါလား။ ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်မ ဘ၀လဲချင် လို့ပါ။ ရှင်….appointment။ နောက်တစ်ရက်….။ ဟုတ်..ဟုတ်။ ရပါတယ်။ နောက်တစ်ရက် စောင့်ပါ့မယ်။”
Posted by ပုံရိပ် / Pon Yate at 19:136comments: Links to this post
နောက်တစ်နေရာမှာ တန်းစီနေသော လူတစ်စု။ လူတန်းကြီးက ရှည်လွန်းနေသည်။ ဘာတွေများ အလကားပေး နေပါလိမ့်ဟု ပုံရိပ်တစ်ယောက် စာများကို လိုက်၍ဖတ်သည်။
ဘုရား….ဘုရား….။ ဘယ်လိုပါလိမ့်ဟု ပုံရိပ်တွေးတောရင်း မူနှင့်စည်းကမ်းချက်များ အကျယ်တ၀င့် ရေးထားသော သင်ပုန်းရှေ့မှာ ရပ်၍ဖတ်ရ ပြန်၏။
ယမမင်းအင်န်ဆန်းစ် ကော်ပိုရေးရှင်းမှ ကြီးမှူးသော ဘ၀ရောင်းဝယ်ခြင်း။
၁) မည်သူမဆို မိမိဘ၀ကို ရောင်းဝယ်နိုင်သည်။ လူမျိုးဘာသာ၊ ကျားမ၊ အဆင့်အတန်း၊ လိင်တူလိင်ကွဲ ရွေးချယ်မှု မခွဲခြားပါ။ မှတ်ပုံတင် နှင့်တကွ မွေးစာရင်း သက်သေပြနိုင် သူကိုသာ ရောင်းဝယ်ခွင့်ပေးသည်။ ၁၈နှစ်အောက် ဖြစ်ပါက မိဘ၏ ခွင့်ပြုချက် ပြနိုင်ရမည်။
၂) ဘ၀တစ်ခုလုံးကိုသာ အရောင်းအ၀ယ်လုပ်နိုင်သည်။ ဘ၀၏ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခု၊ သို့မဟုတ် အချို့ကိုသာ ဖြုတ်၍ ရောင်းဝယ်ခြင်း လက်မခံပါ။
၃) ၀ယ်ပြီး ဘ၀အား နေကြည့်ရန် အစမ်းကာလ ရက်နှစ်ဆယ် ခွင့်ပြုသည်။ အစမ်းကာလ အတွင်းသာ ပြန်လဲလှယ်ခွင့် ရှိသည်။
အသေးစိတ်ကို customer service တွင်စုံစမ်းပါ။
သြော်…ဒါကြောင့် လူတွေတန်းစီ နေတာကိုး။ ရောင်းကောင်းရခြင်း၏ အကြောင်းရင်းကို ပုံရိပ်သဘောပေါက်သွားသည်။ ပုံရိပ်လည်း စိတ်ဝင်စားခြင်း ပြင်းထန်လာ၍ ၀င်တန်းစီသည်။ ဟုတ်တယ်…လိုအပ်နေတာပဲ။ ၀ယ်ကြည့်ဦးမှ။
တစ်နာရီလောက် တန်းစီအပြီး အရောင်းကိုယ်စားလှယ် ရှေ့သို့ ရောက်ခဲ့ပြီ။ သီးသန့်မှန်လုံခန်းထဲမှာ ထိုင်နေသော ကိုယ်စားလှယ်က ထ၍ နှုတ်ဆက်သည်။
“ထိုင်ပါ ခင်ဗျာ။ ရောင်းချင်တာလား၊ ၀ယ်ချင်တာလား ခင်ဗျ”
ယမမင်းရဲ့ လူတွေက ဆက်ဆံရေး ကောင်းသား။ ဈေးသည် ပြီသတယ် ထင်ပါရဲ့ဟုတွေးပြီး ပြုံးပြလိုက်သည်။
“ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်တို့ အကူအညီပေးနိုင် ပါတယ်။ ဘယ်လို ဘ၀မျိုးလိုချင်ပါသလဲ။ ကျားမရွေးလို့ ရပါတယ်။ အစ်မက မိန်းကလေး ဖြစ်ပေမယ့်လည်း ယောက်ျားလေး ဘ၀လည်း ၀ယ်နိုင်ပါတယ်။ နောက်… ပညာအရည်အချင်း၊ အလုပ်အကိုင် စသည် ဖြင့်ပေါ့ အဲဒါလေးတွေ ရွေးလို့ရပါတယ်။ ဒီ form လေးဖြည့် ပေးပါလား။ ဒါဆို ကျွန်တော် ရှာရတာမြန်သွားပါမယ်။ နောက်ပြီး အစ်မရဲ့ သတင်းအချက်အလက် အားလုံးဟာ ကျွန်တော်တို့ ဆီကနေ အစ်မ ခွင့်ပြုချက် မပါဘဲ ဘယ်သူ့ဆီမှ မပေါက်ကြားစေရ ပါဘူး။”
ခေါင်းညိတ်ပြရင်း သူပေးသော form ကိုစ၍ ဖြည့်သည်။ ဘယ်သူ ဖြစ်ချင်သလဲ ပုံရိပ်။ စဉ်းစားစမ်း…။ ရွေးချယ်ခွင့် ရှိလျှင် အောင်မြင်သော စာရေးဆရာ တစ်ယောက်ဖြစ်ချင်သည် တွေးမိ၏။
လိုချင်သော အသက်အပိုင်းအခြား….. ၂၀-၃၅နှစ်
လိုချင်သော အလုပ်အကိုင်…. စာရေးဆရာ
ကိုယ်စားလှယ်ကို form ပြန်ကမ်းပေးလိုက်သည်။ သူက computer ပေါ်မှာ တချောက်ချောက်နှင့် ရိုက်ထည့်သည်။
“ခင်ဗျားတို့ မြန်မာပြည်မှာ ဆရာဝန်ကနေ စာရေးဆရာလုပ်ချင်တဲ့ လူတွေများ တယ်ဗျ။ ဆရာဝန်ဘ၀တွေ ရောင်းချင်တာ ရှိတယ်။ စိတ်ဝင်စားလား။”
“ဟုတ်ပြီ။ ကျွန်တော် ရအောင် ရှာပေးပါ့မယ်။”
ခက်ခက်ခဲခဲ ရှာပြီးနောက် ပုံရိပ်လိုချင်သော ဘ၀ကို တွေ့ပါပြီ။ အောင်မြင်စပြုလာသော စာရေးဆရာမ တစ်ဦး။ အချစ်ဝတ္ထုများ သာမက drama ၀တ္ထုကောင်းကောင်းများကိုလည်း ရေးစပြုနေသူ။ စိတ်ကူးကောင်းကာ အတွေးအခေါ်ဆန်းသစ်သူ။ မဆိုးဘူးဟ။
“တစ်ခုတော့ ရှိတယ် အစ်မ။ အစ်မက သူ့ဘ၀ကို ၀ယ်ရင် ဘ၀ကိုပဲ ရမယ်။ သူ့စိတ်ထား၊ သူ့ဥာဏ်စိတ်ကူး တွေကိုတော့ မရနိုင်ဘူး။ နောက်သူ့မှာရှိခဲ့တဲ့ မှတ်ဥာဏ်၊ အရင်က ဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ် ဆိုတဲ့အသိတွေ ကိုမရဘူး။ ကျွန်တော်တို့က သူ့ဘ၀ရဲ့ ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်ကိုတော့ အမြန်သင်တန်းပေးမယ်။ ပြီးတော့ အစ်မရဲ့ မှတ်ဥာဏ်မှာ install လုပ်ပေးမယ်။ ဒါပေမယ့် အစ်မက ဒီမှတ်ဥာဏ်ဟာ ကိုယ်ပိုင်မဟုတ်ဘူး ဆိုတာတော့ အမြဲ သိနေလိမ့်မယ်။”
သူပြောတဲ့ စကားကြောင့် နည်းနည်းဖြုံသွားသည်။ အင်း…. ဒါပေမယ့် အစမ်းသပ်ခံ ကာလရှိတာပဲ။ မကြိုက်ရင် ပြန်ပေးမှာပေါ့။
“ဟုတ်ပြီလေ။ ဒါဆို ဈေးကရော။ ဘယ်လောက်လဲ။ credit card လက်ခံလား။”
“ဈေးကတော့ အစ်မ ဘ၀ပါပဲ။ အစ်မဘ၀ကို ကျွန်တော်တို့ ပထမစီစစ်မယ်။ ရာဇ၀တ် ပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့သူ မဟုတ်ရင် ရောင်းလို့ရမှာပါ။”
ပုံရိပ်နှင့် အပေးအယူတည့်ပြီးနောက် form တစ်ခုမှာလက်မှတ်ထိုး ရသည်။ ရေးထားတာကတော့ အစမ်းသပ်ခံ ကာလမှာရော၊ ၀ယ်ပြီးနောက်ရော ဖြစ်လာမည့် ကောင်းကျိူးဆိုးကျိုးများ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုများသည် ယမမင်းနှင့် မသက်ဆိုင်ပါ…စသည် စသည်ဖြင့်။ ကဲ…လာလေရော့ဟဲ့…စာရေးဆရာ ဘ၀။ (ဘလောက်ပေါ်မှာတင် မကစာအုပ်ပေါ်မှာပါ လက်စွမ်းပြတော့မည်။)
Posted by ပုံရိပ် / Pon Yate at 19:245comments: Links to this post
“လောကဈေး” (World Mart)
မီးရောင်များ ထိန်လင်းနေသော ဆိုင်းဘုတ်ကြီးက ဆိုင်နှင့်အညီ ခမ်းနားလွန်းနေသည်။ ပုံရိပ်တစ်ယောက် ကြောက်ဆုတ်ဆုတ်နှင့် ဆိုင်ထဲကို ၀င်ခဲ့မိပြီ။ အ၀င်ဝမှာ ရပ်နေသော ဈေးကြိုအမျိုးသမီး ချောချောလေး နှစ်ယောက်က ပြုံးပြနှုတ်ဆက်၍ နည်းနည်း အကြောက်ပြေသွား သယောင်။ ထိုအမျိုးသမီးလေး များက ပုံရိပ်ကို လက်ကမ်းစာစောင်လေးများ ဝေပေးသည်။ ဘာပါလိမ့်ဟု ကြည့်မိတော့ သူတို့ဆိုင်၏ မူဝါဒ အကြောင်း။ ထူးထူးခြားခြား ကြော်ငြာထားတာက သူတို့ဆိုင်မှ ပစ္စည်းများကို ၀ယ်ပြီး ပြန်လဲလှယ်သည့် စနစ်၊ ငွေပြန်အမ်းသည့် စနစ် ရှိသည်တဲ့။ ဒါများ ဘာထူးခြားလို့လဲ၊ တခြားဆိုင်တွေ ဆိုလည်း ဒီလို ကျင့်သုံးကြတာပဲ ဟုရေရွတ်ရင်း စာရွက်ကို အိတ်ထဲ ခေါက်၍ထည့်ရင်း ဆက်လျှောက်လာ ခဲ့သည်။
ယနေ့ ခေတ်စားနေသော ဘာ mart ညာ mart များနှင့် မခြား ပစ္စည်းများက အစုံအလင်။ တစ်လိုင်းဝင် တစ်လိုင်းထွက် ပုံရိပ်လျှောက်ကြည့် မိသည်။ အ၀တ်အစားများ၊ ပရိဘောဂများ၊ စာရေးကိရိယာများ၊ စသည်ဖြင့်။ ကိုယ့်မှာရှိပြီးသား အရာများ ၀ယ်စရာ မလို။ မလိုအပ်လျှင် မ၀ယ်နဲ့ဆိုသော စည်းကမ်းကို လိုက်နာရပေမည်။
တစ်နေရာမှာတော့ ပုံရိပ် အကြီးအကျယ် စိတ်ဝင်စား သွားသည်။ “အိမ်ထောင်ဖက်/ရည်းစား” ဟူသော ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ…ဓါတ်ပုံများ။ မ၀ယ်ရင်တောင် လျှောက်ကြည့်ဦးမှ။ တစ်ပုံချင်းးကို ရှင်းလင်းချက်နှင့် တကွ ကတ်ထူပြားတွေပေါ်မှာ ကပ်၍ထားသည်။ “petite” ဟူသော ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ခပ်သေးသေး သွယ်သွယ် မိန်းမ၊ယောက်ျား တချို့။ ကျွန်မအလေးချိန် ကတော့ ပေါင်ကိုးဆယ်ပါ.. ပေါင်တစ်ရာပါ…စသည်ဖြင့်ပေါ့။ “Medium” ဟူသော ခေါင်းစဉ်အောက် မှာတော့ ကြည့်ကောင်းသားဟု ပုံရိပ်တွေးမိသည်။ ပြီးတော့ “Large” “XL” “XXL”။ အဲဒါတွေတော့ ကြည့်ဖို့ စိတ်မ၀င်စား။
တစ်နေရာမှာ အနီ၊ လိမ္မော်ရောင်များ ထိန်နေသော တံဆိပ်များဖြင့်… လျှော့ဈေးဆိုပါလား။ လျှော့ဈေးကုန်များရှေ့မှာ ပုံရိပ်ရပ်လိုက်သည်။ “SAVE 50%....HAVE A FULL TIME JOB” “SAVE $$$ayear…I AM ON DIET” “No emotional outburst for three years, GUARANTEED!!” “GREAT SAVING… REFURBISHED…LIKE NEW…IN MINT CONDITION” “Buy one husband and get two kids for free” ရယ်မိသည် ထင်သည်။ ပုံရိပ်နောက်မှာ အရိပ်တစ်ခုတွေ့တော့မှ လှည့်ကြည့်မိသည်။ ဓါတ်ပုံတွေထဲမှ မျက်နှာတစ်ခု။ ရှူတည်တည်နှင့် ဘုကြည့်ကြည့်နေသည်။ မလွယ်ဘူး… သွားမှဟု ကိုယ့်ဟာကိုယ် ပြန်သတိပေးရင်း ကုတ်ချောင်းချောင်း ထွက်လာခဲ့သည်။
Posted by ပုံရိပ် / Pon Yate at 11:084comments: Links to this post
ချိန်တာ ကြာတော့ အားနာလာတာနဲ့ နောက်ရေးထားတဲ့ ကဗျာ တစ်ပုဒ်။ သဒ္ဒါတွေ မှန်ချင်မှမှန် ပါလိမ့်မယ်။ သည်းခံကြပါ။
I can’t hear any command
Nor even think of those glorious and prestigious things I was fighting for
But the grievous pain of the dying soldiers
But the tears of the inconsolable widows
Amidst the shower of bullets
The blood stained flag pretends to be victorious and elegant
The land exchanged with lives and blood seems to dignify the sacrificed souls
But I can’t value it no more than
The order “You may rest in peace”.
Posted by ပုံရိပ် / Pon Yate at 11:323comments: Links to this post
Posted by ပုံရိပ် / Pon Yate at 04:414comments: Links to this post
Posted by ပုံရိပ် / Pon Yate at 07:55 11 comments: Links to this post
စိတ်တိုင်းကျကြီး မဟုတ်သော်လည်း တင်လိုက်ပါဦးမယ် ကဗျာတစ်ပုဒ်။
ရခဲ့တဲ့ ဖလား အစုတ်တစ်လုံး
ပေးလိုက် ရတာဝိညာဉ် တစ်ကောင်။
ကိုယ်မသိ မှတော့ မြေမြှုပ်ပစ် လိုက်မယ်
Posted by ပုံရိပ် / Pon Yate at 11:374comments: Links to this post
ကွန်ပြူတာ စာမျက်နှာ ဖြူဖြူကို ငေးကြည့်တာ ကြာပြီပဲ။ ညာဘက်ထောင့်က အချိန်ကိုပြနေသော ဂဏန်းတွေကို ကြည့်မိတော့ ညသန်းခေါင်ကျော် တော့မည်။ ရေးစရာ ဘာမှမထွက်။ ဒေါသတော့ ထွက်လာသည်။ ရေးချင်သော စိတ်က အလွန်ကြီးစိုးနေ သော်လည်း ကုန်ကြမ်းမရှိ။ မရှိသော အကြောင်းအရာကို စကားလုံးတွေနဲ့ ဖော်ပြလို့ ရပါသလား။ ကိုယ်ဘာရေးချင်မှန်း မသိဘဲနဲ့ စာရေးလို့ ရပါသလား။ စဉ်းစားလွန်းတော့ ဦးနှောက်တွေ ပူလာသည်။ စိတ်အပြောင်းအလဲ ဖြစ်အောင် ကော်ဖီလေး တစ်ခွက်လောက် တော့ဖျော်ဦးမှ။
စဉ်းစားနေတာ ဘယ်လောက်ကြာ သွားသည် မသိ။ ရေနွေးဆူသံ တပွက်ပွက်ကြားမှ သတိပြန်ဝင်လာသည်။ မီးဖိုကို လှမ်းပိတ်လိုက်ပြီး ရေနွေးအိုးကို မီးဖိုပေါ်မှ ချလိုက်သည်။ ရေနွေးက ပူလွန်းသေးတယ်ဟူသော အကြောင်းပြချက်နဲ့ ကွန်ပြူတာရှေ့ကို ပြန်ရောက်လာ ပြန်ပြီ။
မျက်စိရှေ့မှာ အဖြူရောင် သက်သက်…..။ အား…ဘာရေးရမှာလဲ….။ ခေါင်းကိုစုံကုတ် မိသည်။ အနီးကြည့်မျက်မှန်ကို ချွတ်၍ စာရေးစားပွဲ ပေါ်တင်လိုက်၏။ နောက်မှီပေါ် ခဏမှေးပြီး မျက်စိမှိတ် စဉ်းစားဦးမှ။ အင်း ၀တ္ထုရေးရင်ကောင်း မလား။ အချစ်ဝတ္ထု ကောင်းကောင်း တစ်ပုဒ်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်။ အချစ်အကြောင်း ကောင်းကောင်းမသိဘဲနဲ့များ ၀တ္ထုရေးချင် သလား။ ကိုယ့်နားထဲ မှာလှောင်ရယ်သံ သဲ့သဲ့ကြား လိုက်သလို။ လူတွေရဲ့ ဘ၀ သရုပ်ဖော် ရေးရကောင်း မလား။ ကိုယ်ရေးတတ်သော အကြောင်းအရာ အချို့မှာ ကိုယ့်ထက် အဆပေါင်းများစွာ သရုပ်ဖော်နိုင်သူများက ရေးခဲ့ကြပြီးပြီ။
ဒါဖြင့် အတွေးအခေါ်ပိုင်းဆန်တဲ့ စာတစ်ပုဒ်လောက် ဆိုရင်ကော။ တွေးရခေါ်ရ တာတွေ များလွန်းပြီ ဆိုတော့ မတွေးချင်တော့ပါ။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဟာသစာမျိုး ရေးရင်ရမလား မသိ။ ခုတလော မျက်နှာက ရှစ်ခေါက်ချိုးနဲ့ ဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲလို့ သူငယ်ချင်းတချို့က မေးတာ ခံနေရအောင် စိတ်ကမကြည်သာ။ အာ… မဖြစ်သေး ပါဘူး။ အဲ.. ကဗျာစပ်ရင် ကောင်းမလား။ ဟုတ်ပြီ။ အပြင်ကို လှမ်းကြည့်တော့ ပိန်းပိတ်နေသော အမှောင်ထု တစ်ခုသာ။ မီးရောင်ညစ်ညမ်းမှု မလိုချင်သူများ အတွက်တော့ သဘောကျစရာ။ လမ်းမီးတိုင်က ကိုယ့်ပြတင်းပေါက်မှ တော်တော်လေးလှမ်းသည်။ အမှောင်ထု… အမှောင်တစ်ခု… လကိုထုချေ… ကြယ်တွေကြွေရင်…အဲ… ကြယ်တွေကြွေရင်…။ ဟာ မဟုတ်သေး ပါဘူး။ ဟိုနေ့ကပဲ ကြယ်တွေကြွေပြီး သွားပြီ။ Delete…နဂိုအတိုင်း အဖြူရောင် စာမျက်နှာတစ်ခု။ စိတ်ဓာတ်တော်တော် ကျသွားသည်။ စာရေးဆရာ တစ်ယောက်ရဲ့ ဒုက္ခကို နည်းနည်း ကိုယ်ချင်းစာမိသလို။ စာတစ်ပုဒ်ထွက်ဖို့ ဆိုတာ မလွယ်ပါလား။ အနည်းဆုံးတော့ ကိုယ့်အတွက်ပေါ့လေ။
ထိုင်ရာက ထလာခဲ့သည်။ လမ်းလေးဘာလေး လျှောက်လိုက်ဦးမယ်။ ဒါကြောင့် စာရေးဆရာတွေ ဆေးလိပ်လေး ဖွာလိုက်၊ လက်ဖက်ရည်လေး သောက်လိုက်၊ ရေနွေးကြမ်းလေး၊ အဲ..ဟိုဟာလေး ဒီဟာလေး သောက်လိုက်နဲ့ ရေးတာဖြစ်မယ်။ ဟောတော့.. ကော်ဖီ။ ကော်ဖီသောက်ဖို့ ဖျော်ထားတာလေ။ မီးဖိုထဲကိုယ်ပြန်ဝင်လာပြီး ရေနွေးအိုးကို စမ်းကြည့်တော့ အေးစက်၍ နေပြီ။ အင်း…. ရေနွေးပြန်တည် ဦးမှ။
Posted by ပုံရိပ် / Pon Yate at 08:073comments: Links to this post